के तपाईं ती मित्र सँगै सबै समय हो जो भन्छौ? Siamese जोडाहरू? हो, तर अझै पनि मित्र "सधैं सँगसँगै"। यो आज हाम्रो ध्यान को क्षेत्र मा एक अभिव्यक्ति हो। "पानी razolesh छैन" - मूल्य phraseologism पार्स र अत्यंत ध्यान संग विश्लेषण।
सबै थप वा कम थाहा यसलाई कसरी - कसैसित लड्न। हामी Schoolyard मा झगडे मार्फत पारित एउटा तरिका सबै बच्चाहरु वा अर्को छन्। एक पटक कसैले शिकार रूपमा काम गरे छ, तर कसैलाई थियो "आँधी आसपास क्षेत्र।"
रूस मा जीवन सधैं यस सन्दर्भमा (विशेष गरी 20 औं शताब्दीको 90 को दशक मा) मा केही संघर्ष कल्पित छ। तर विभिन्न क्षेत्रमा लगभग सबै देशहरूमा झगडा। सामान्यतया, आक्रमण गरिबी संग coexists। यो किशोरावस्था सुरु। मानिस धेरै प्रारम्भिक उहाँले छ र के यो वयस्क लाग्छ सक्छ रूपमा उहाँले छ जो सजग। उदाहरणका लागि, तपाईं फिलिम "परमेश्वरको शहर" हेर्न, वा गर्न सक्छन् पुस्तक Charlza Bukovski पढ्नुहोस् "राई मा हाम।"
पाठकहरु केही भन्न हुनेछ ", प्रतीक्षा हामी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ" पानी सर्तहरू razolesh छैन। " phraseologism लेखक अर्थ सबैभन्दा वास्तवमा, यो सबै वचनहरू को अर्थ एउटा सीधा सम्बन्ध छ लिनुपर्छ! "।
तातो रूसी भएकालाई र चिसो पानी
रूस मा पनि, जवान मानिसहरू त बोल्न, लड्न बाफ बन्द गरौं, मन परायो। मनसाय बारेमा यो मात्र मानेर न्याय गर्न गाह्रो छ। शायद तिनीहरूले भर्खरै जस्तो गरे, र शायद मामला मा। हामी अहिले यो समस्या रुचि छैन छ। यो मान्छे पनि हल्ला वा बाधा अरूलाई सुरु भने, तिनीहरूले सुन्दर छन् भनेर, बरफ पानी doused छन् महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले, परीक्षण पानी पारित र यस्तो मित्र भनिन्छ गर्नेहरूलाई कि "पानी razolesh छैन"। phraseologism अर्थ अन्तमा यसको सबै शोभा हामीलाई अघि थियो। ऐतिहासिक गहिराई जाँदै गर्दा, भाषा स्पष्ट, पनि आफ्नै, विदेशी हुनत बन्नेछ।
आधुनिक संसार र वाक्पद्घति
अब, रूस सडकमा कम प्राय भयो मा कुराहरू बाहिर क्रमबद्ध छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद। तर, यो बाबजुद वाक्यांश "पानी razolesh छैन" (phraseologism अर्थ - "inextricably प्रत्येक अन्य लिङ्क छन्") वरिपरि अझै पनि छ। यो रिसोर्ट तपाईं राम्रो मित्र को सम्बन्ध वर्णन गर्न आवश्यक छ। त्यसैले स्कूल जीवनसाथी वा सँगी विद्यार्थी, सबै समय सँगै हुन्छन् जो कुरा।
कहिलेकाहीं तपाईं एक विशेष अभिव्यक्ति लागि पर्यायवाचीशब्दप्रविष्टगर्नुहोस् आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एक विदेशी वा बच्चा आफ्नो अर्थ व्याख्या गर्न। र, सोध्न गर्ने पाठक "तपाईं के मतलब" कुनै पानी razolesh "? phraseologism अर्थ "पाठक प्राप्त यो हराएको हुँदैन र हँसिलो आवाज भन्न?" कसरी समाधान गर्न एक शब्द सँगसँगै सँगसँगै "यो को सम्बन्ध वर्णन गर्ने शब्द हो" "।
के आश्चर्य छ भाषा मानिसहरूलाई केही एक सारांश छ भन्ने छ। यो हरेक लाइन पछिल्लो मानव अस्तित्वको विशाल गहिराइमा मा संकेत। यो अत्यन्तै रोमाञ्चक र रोमाञ्चकारी छ। भाषा को इतिहास छोएर प्रत्येक समय, एक व्यक्ति आफैलाई बारेमा कुरा बुझ्नुहुन्छ।
अनियमित conjugated क्रिया कसरी गठन गर्ने
Asyndetic प्रस्ताव उदाहरण। एक अल्पविराम Conjunctionless वाक्य
कठिन शब्दहरू Derivational श्रृंखला। शब्द-निर्माण को एक श्रृंखला कसरी निर्माण गर्ने? उदाहरण derivational चेन
Terracotta - दिन को रंग
"टाटा स्यान्टाफी" 2.2 डिजेल: समीक्षा
मरियम स्टुअर्ट - एक महिला र एक रानी
Flatfoot। विकास कारणहरू। flatfoot को रोकथाम
सफ्टवेयर - यो के हो? कस्तो सफ्टवेयर कार्यक्रम?